ညီမတို့ကတော့ ပြည်သူ့ဆိုင်ဆန်တော့ မသိဘူး။ ရုံးဆန်တွေတော့သိတယ်။
အဒေါ်ရောဂါကြောင့်ရောစားကြတာဆိုတော့ တခါတလေ အမဲစေ့ ဖြစ်ဖြစ် စပါးလုံးဖြစ်ဖြစ် တလုံးတလေ ပါရင်တောင် ညီမက အန်ထုတ်ပီး ဆက်ကို မစားနိုင်တော့ လို့ အိမ်က လူတွေက တော်တော် သတိထားပေးရတယ်။
အမ.. ရွေးကောက်ပွဲ .. မိုက်တယ်။ ခေါင်းစဉ်ရယ် စာသားရယ်။ ဟီး
ဒီအတွေး၊ ဒီအရေးတွေနဲ့ဝေးနေတာကြာပြီး အခုမှပြန်ဖတ်ရတော့ အရသာရှိလိုက်တာမေရယ်။ ပြည်သူ့ဆိုင်ခေတ် တို့လဲမှီတယ်။ အဲဒီတုန်းက လွတ်လပ်ရေးနေ့အားကစားပွဲဆို စပါးလုံးကောက်ပြိုင်ပွဲ(ရွေးကောက်ပွဲ)တောင်ပါသေးတယ်။
အခြေအနေရယ်၊ အချိန်အခါရယ်၊ ခေါင်းစဉ်ရယ်၊ တင်ပြ ပုံရယ်၊ စကားလုံးရွေးချယ်မှုရယ်...အားလုံးဟာ စပ်ဟပ် လွန်းလှချည်လား မမေဓာဝီရေ...။ အင်မတန်မှကို ရိုးစင်း ကောင်းမွန်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါပဲဗျာ။
ကျနော်တို့ညီအကိုလည်း ငယ်စဉ်က တစ်ပတ်တခါ ရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပရလေ့ ရှိပါတယ်၊ ပြည်သူ့ဆိုင်ကဆန် တွေက ပြည်သူ့အတွက် တခါမှကောင်းကောင်းမွန်မွန် မရှိခဲ့လေတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ ဇယ်ဆက်နေခဲ့ တော့တာပေါ့လေ...။
ကျမဘာရေးရေး အမြဲအားပေးတဲ့ မခိုင်နဲ့ ညီမငယ် ဖြူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခုထက်ထိ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဘလော့ရေးနေရတာမို့ တခြားဘလော့တွေလည်း မလည်နိုင်၊ မဖတ်နိုင်သလို ကိုယ့်ဆီလာလည်ပြီး ကွန်မန့်ရေးတဲ့သူတွေကိုတောင် ဧည့်ဝတ်မကျေနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ နောက်လည်း အမြဲ အားပေးကြပါဦးနော်။
မမေဓာဝီ ပြောတာနဲ့ ဆန်နီတွေ ဘာတွေသာ မစီးနိုင်တာ။ အိမ်မှာ ဆန်နီ စပါးလုံးတွေပါတဲ့ ဆန်တွေတော့ စားနိုင်သားပဲလို့ ခဏခဏ ဟာသ လုပ်ပြီး ပြောခဲ့ဖူးတာ သတိရတယ်ခင်ဗျ။
သင်္ကြန်အကြို, နေလဲ ညိုပြီ, ငါ့ကို အိမ်ပြန်ခွင့်ပေးပါ...။
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ သမဆိုင်က ဆန်ကိုများ စပါးလုံးနဲ့ စက်ချေး၊ ကြွက်ချေးတွေ သွားရွေးဖယ်နေတော့ ကြာမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ အမှန်က ဆန်ကို ရွေးဖယ်လိုက်ရင် ပိုမမြန်ပေဘူးလား။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရတော့ အင်းစိန် တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်က သမဆိုင်မှာ သွားတန်းစီရတာ သတိရသေးတော့။
ဟားဟား။။ စပါးလုံးမရွေးရတာ ကြာပြီပေါ့ မမေ..တစ်ခါတစ်လေလည်း စပါးလုံးရွေးချင်ပါသေးတယ်.. ကြာပြီလေ မရွေးတာ.. ဒီတစ်ခါရွေးရင်တော့ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရွေးမှာပါ.. မရွေးတာလည်း ကြာပြီဆိုတော့.. ပြီးတော့ ကိုယ်တွေပဲ ပြန်စားမှာလေ.. သန့်သန့်လေးလုပ်တော့ စားတဲ့အခါ ဖြောင့်တာပေါ့နော်...
yup bread is also expensive though?
Your writing is very simple. I read all your opinions are very nature of thinking, we can re-imagine about Gunkiro flower with water festival. Good, good